maxay tahay rajada laga qabo dareenka shahaadada ITIL - Iskuulka ITS Tech
Sidee shahaadada ITIL ku caawinaysaa Xirfadda
Shahaadada ITIL ayaa kobcisay koorasyada khibradaha leh ee dabayaaqada. Xaqiiqadani si wadajir ah ayaa loo xalliyaa ka dib, iyada oo la tixgelinayo isku-xidhka ITIL ee 15 ugu wanaagsan ee bixinta shahaadada sanadka ee 2014. Ujeedada ka danbeysa sababta ay khabiirada ITIL u aqoonsadeen inay ka soo horjeedaan wakiilo kala duwan ama dadka shaqo doonka ah waa in ITIL loo baahan yahay ururo badan oo la xidhiidha ganacsiga IT. Sidaas daraadeed, khabiirada ITIL waxay si firfircoon uga shaqeeyaan ururada IT-da ee shaqo-bixiyeyaasha qaaliga ah.
In la iloobo tayada aan habooneyn ee nidaamka ITIL, taageerayaasha xayeysiinta ah waxay leeyihiin farabadan oo waxtar leh oo ku saabsan furitaanka xirfadaha taas oo ku taal horudhaca koorsadan. Maqaalkan yar ayaa kaa caawin doona in qofka kaa soo horjeeda uu abuuro aragti guud oo ku wajahan goobta suuqa shaqada ee loogu talagalay khabiirada ITIL Certified.
Si joogto ah, nidaamyada ITIL waxay ku xiran yihiin Maareynta Adeega. Qeybaha inta badan la filayo ka dib marka la gaaro xaqiijinta ITIL waa kuwa ka mid ah Falanqayaha Dhacdada, Isku-duwaha Isbeddelka, Falanqaynta Dhibaatada, iyo wixii la mid ah.
Qayb ka mid ah ITIL ee ku jira injineernimada
Maqalka Xirfadda ee Xirfadlayaasha Shahaadada ee ITIL
Laba gobol oo ku-meel-gaadhka ah ee software-ka ah waa horumar iyo hagaajin. Inkastoo horumarinta software-ka ay maamusho codsiyada cusub ee gudaha wakhtiga loo qoondeeyey ee loo isticmaalo maamulka isticmaalka ganacsiga, taageerada software waxay ka welweleysaa maamulka iyo kashaqaynta marka codsiga la dhammeeyo oo la ordo. ITIL waxay leedahay qayb ka mid ah cabsi weyn oo lagu ciyaaro hagaajinta software-ka.
Shakhsi kasta oo ku shaqeeya software-ka, taageerada IT-ga, qaab-dhismeedka ama maamulku waxay muujinayaan hirgelin ballaaran oo lagu xaqiijinayo ITIL.
Qaadashada shahaadada ITIL kadib waxaa lagu gaari karaa imtixaanada ITIL.
ITIL Foundation: Imtixaannadani waxay ku saleysan tahay barashada aasaasiga ah ee jaangooyooyinka muhiimka ah, foomamka, qaybaha, kartida, fikradaha, shuruudaha, iyo wixii la mid ah.
ITIL Intermediate: Imtixaankani waxa uu cabirayaa awoodda codsadayaasha ee maamulka baaritaanka dhabta ah.
Maareynta Dhinaca Lifec Cycle: Tijaabadani waxay burburinaysaa awoodda ah in la burburiyo oo la isku daro waxyaalihii malaha.
ITIL Khabiir: Tani waxay muujinaysaa muujinaysa khibrad aad u fiican, sida awoodda, nidaamka ITIL.
ITIL Masters: Tani waa qadarka ugu weyn ee ITIL xaqiijinta, waxaana ku hela kaliya shakhsiyaadka 35 meelkasta oo adduunka ah.
Ilaa xadkee suuqa suuqa shaqada ayaa ka welwelsan, halkan waa tirooyin shaqaale ah oo kugu waajib ah inaad raadiso si aad u aragto khibradaada khibradda-
Heerka Bilowga ah(0 ilaa sannadka 7 khibrad):
Marka hore wacitaanka maamulka faa'iidada IT, tusaale ahaan, IBM Tivoli iyo BMC Remedy.
Shaqooyinka la xiriira aasaaska IT-da ee MNCs.
Hagaajinta IT-ga, ka-faa'iideystaha imtixaan-qaadaha, dejinta naqshadeynta goobta shaqo, taageero gaar ah, iyo wixii la mid ah.
Heerka Dhexe(In ka badan sannadka 7 khibrad):
Shaqooyin badan oo la isku halleyn karo,
Maareeyaha Adeegga IT-ga
Xiliga ama Maamulaha Dhibaatada
Maamulaha Masruufka Manfaca
QIIMEYNTA MUHIIM AH:
Waxbarashada noocan oo kale ah ee aasaasiga ah waxay keenaysaa qaybo, tusaale ahaan,
La-taliyaha Bilaashka ah ee ITIL
U fiirso in markaad u qalantid inaad ku soo bandhigto ITIL, oo ​​aad ka gudubto, ka madax banaanaato aasaaska khibraddaada, waxaa laga yaabaa inaysan jirin wax aad u badan inta laga gaarayo furitaanka shaqada ee fursada aanad haysan aasaaska IT . Haddii aad u maleyneyso, xaalad kasta, waxaad qorsheyneysaa inaad ku guuleysato ama haddaad leedahay xirfad ah barnaamijka hagaajinta iyo maamulka, tani waa aqoonsiga ugu fiican ee adiga kugu habboon.
Solutions Technologies Innovative (ITS Training) waxay ku siineysaa inaad qaadato koorsooyinka shahaadada ee ITIL & imtixaanTababarka ITIL ee Guriga